Momba anay - Szlightall Optoelectronics Co., Ltd.
SZLIGHTALL Optoelectronics Co., LTD. dia naorina tamin'ny taona 2013. ny foibeny dia any Shenzhen. Araka ny fantatra, orinasa mpamokatra indostrialy goavambe i Shenzhen, ity misy rojika SUPPLY feno fisehoan'ny LED. Izahay dia orinasa teknolojia avo lenta izay mifantoka amin'ny R&D, famokarana, fivarotana ary fanolorana fampiratiana LED. Manana ny foibem-piasanay sy ny toby famokarana any Shenzhen izahay, efa nanondrana firenena maherin'ny 100 manerantany, miaraka amina tetikasa maro mahomby.
Taorian'ny taona maro nampivoarana, nanangona traikefa manan-karena amin'ny R&D izahay ary manana fitaovana famokarana mandeha ho azy kilasy voalohany, zavamaniry famokarana automation madio madio ary fitaovana rafitra anti-static. Izy io dia nametraka dingan-dahatsoratra famokarana matihanina mampiseho, izay manome antoka mahomby amin'ny fanatsarana ny kalitao milamina sy ny vidin'ny vokatra mahomby amintsika.
Ny vokatra dia misy karazana sy fanamorana isan-karazany, ny vokatra manarona fisehoana loko feno amin'ny loko sy ivelany, fisehoana doka LED, seho an-tsehatra LED, fisehoana endrika tsy ara-dalàna LED, fampirantiana tarihin-tariby LED, fampirantiana fanatanjahantena LED, fampisehoana fampahalalana momba ny fifamoivoizana LED, izay nanjakazaka tamin'ny tsena anatiny sy iraisam-pirenena amin'ity indostria ity.
Amin'izao fotoana izao dia manana tranga mahomby mihoatra ny 5000 manerantany isika. Mahazo ny fahatokisan'ny marika iraisam-pirenena izahay ary miseho amin'ny fifaninanana manerantany sy hetsika iraisam-pirenena, manintona ny sain'ny mpanjifa an'arivony. Mifikitra amin'ny finoantsika izahay: "vokatra avo lenta, teknolojia avo lenta, serivisy avo lenta". Mifikitra amin'ny mpanjifa mifantoka amin'ny mpanjifa izahay ary mamorona hatrany mifototra amin'ny fangatahan'ny mpanjifa, mahazo ny fanajana sy ny fahatokisana. Ny vokatray dia nitarika tamin'ny fanarahana ny fanamarinana ny fenitra 3C, UL, TUV, EMC, CE, RoHS ary ISO9001 ao amin'ny indostria.
Ny orinasanay dia manana ekipa marketing, teknolojia ary fitantanana tena tsara, manan-karena traikefa amin'ity sidina ity izahay, hahafahanay mifantoka amin'ny vokatra R&D, mahazo vokatra vaovao ary manatsara ny teknolojia tsy tapaka. Serivisy an-tserasera 24 ora ny ekipa, vonona ny hamaha izay olana mahazo ny mpanjifa. Noho ny vokatra avo lenta miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana, ny vahaolana matihanina ary ny serivisy aorinan'ny varotra tsara, ny orinasa Lightall dia mahazo dera avo avy amin'ny mpanjifa manerantany. Na izany aza, tsy hijanona izahay; hanohy hanome ny vokatra tsara kokoa sy serivisy ho an'ny mpanjifanay izahay. Ny tanjonay dia ny mitazona fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpanjifa.